Razafindramboa Marie Hortense : « Loza mitatao ny tsy fahaiza-mikajy… ny vakoka » | NewsMada
Razafindramboa Marie Hortense : « Loza mitatao ny tsy fahaiza-mikajy… ny vakoka »
Notontosaina omaly, tetsy anoloan’ny Tahala Rarihasina Analakely, ny fanamarihana ny « Andro iraisam-pirenena ho an’ny mozea » (Jim). Tafa nifanaovana tamin-dRazafindramboa Marie Hortense, talen’ny Ofisy mitantana ny vohitr’Ambohimanga (Oscar) no nanazavany fa « loza mitatao eo amin’ny fanabeazana ny tsy fahaiza-mikajy sy ny tsy fampiroboroboana ny vakoka ho fantatry ny taranaka aty aoriana ». Raha ny fanazavany, fitaovana afaka mitahiry hafatra sy soatoavina ny vakoka. Tsy misy manana io toetra ilaina amin’ny fanabeazana io raha tsy ny vakoka ihany. Azo hanovozam-pahalalana no miteraka fifanakalozana ny fisian’ny fitehirizam-bakoka. « Ny maha izy antsika no very raha sanatria ka simba na potika, sns, ny vakoka », hoy hatrany ny talen’ny Oscar.
Tsy takon’afenina ny fisian’ny fanatontoloana sy ny fibosesiky ny teknolojia vaovao amin’izao vanim-potoana izao. « Manabe ihany koa ireny, saingy mety ahitana fifanoherana amin’ny fanabeazana nisy teto. Mety ho afaka mifameno koa anefa raha hay sy voatazona tsara ilay fomba fanabeazana avy amin’ny fisian’ny tahirim-bakoka… Satria tsy ho very mihitsy ny maha izy ny Malagasy », hoy izy. Noho izany, mila ampiroboroboana ny anjara toeran’ny mozea eo amin’ny fiarahamonina.
Fantatra fa mahatratra 25 ny mozea eto Madagasikara. Roa kosa no mangataka ny hanangana mozea : ny Akademia Miaramila sy ny Ekar Andohalo. Anisan’ny fepetra takiana amin’ny fanatontosana izany ny fananana angon-tahiry, trano hanaovana ny fitahirizana, toerana hahafahana manarina ny simba, olona hitantana izany, sns.
Lohahevitry ny « Jim » amin’ity taona ity : « Mozea sy ny tantara mampangirifiry, miresaka ny tsy azo resahina ny mozea ». Voamarina tamin’ny ranty omaly tokoa io lohahevitra io. Iray amin’ireny, ohatra, ny teny nambaran’i Marcel de Coppet tany Betafo ny 17 avrily 1947 nanao hoe « Raha ady no tadiavin’ny Malagasy, dia ho avy ny ady ». Tsy faheno kanefa nisy raha ny voarakitry ny vakoka.